Nagarik News - 'नाकाबन्दीको असर दीर्घकालसम्म'
होमपेज / अर्थ / 'नाकाबन्दीको असर दीर्घकालसम्म'
'नाकाबन्दीको असर दीर्घकालसम्म'	18 Nov 2015 | 08:16am बुधबार २ मंसिर, २०७२
वर्तमान राजनीतिक आर्थिक गतिरोध लम्बिदै गए उद्योगीहरु टाट पल्टिने स्थितीमा पुगिसकेको नीजिक्षेत्रका अगुवाको भनाइ छ । नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्धारा मंगलबार आयोजित अन्तक्रियामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कतिपय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताए । यस्तै, तराइ मधेस आन्दोलनको बहानामा भारतद्धारा गरिएको नाकाबन्दी करिब ३ महिना हुनलाग्दा यसको नकारात्मक असरले सबैभन्दा बढि उद्योगमा परेको छ । सरकारले माग अनुसार विद्युत आपुर्ति गर्न नसक्दा उद्योगीहरु आयातीत डिजेलमा भर पर्नुपर्ने स्थिती छ । तर नाकाबन्दीले भने चालु आर्थिक वर्षमामात्र नभएर दीर्घकालीनरुपमा नै पर्ने अर्थविद्हरुको पनि धारणा रहेको छ । प्रस्तुत छ, नागरिककर्मी कुबेर चालिसे, सन्तोष न्यौपाने, लक्ष्मण वियोगी तथा विष्णु बेल्बासेले तयार पारेको सामाग्री:तीन महिनाको नोक्सानी सरकारले बेहोर्नुपर्छपशुपति मुरारकाअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअहिलेको समस्या पूर्णतः राजनीतिक हो । राजनीतिक समस्या समाधानको उपाय वार्ता हो । नाकाबन्दीअघि मधेस आन्दोलनलाई ध्यान नदिँदा अहिलेको समस्या आएको हो । संविधानअघि ४३ दिनसम्म आन्दोलनलाई वास्ता गरिएन, अन्दोलनै मानिएन । त्यो बेला सम्बोधन गरेको भए छिटो समाधान हुन सक्थ्यो ।हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ । यहाँको समस्या समाधान भएमात्रै नाकाबन्दीबारे बोल्न सजिलो हुन्छ । २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी भएको थियो । त्यो बेला नेपाल एक थियो, अहिले विभाजित छ– नाकाबन्दी हो कि होइन भन्नेमा ।पहिले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नुप¥यो । वार्ता, वार्ताको लागि नभएर उपलब्धिमूलक हुनुप¥यो । हामीले पनि थाहा पाउनुप¥यो कि वार्तामा के भइरहेको छ । हामीले दुवै पक्षलाई भेटेका छौं । उनीहरू एक–अर्कालाई दोष दिन्छन् । वार्ताबाट समाधान निकाल्नेबित्तिकै भारतलाई नाका खोल्ने बाध्यता हुन्छ ।अहिले पनि सबै नाका पूर्ण बन्द छैनन् । केही सामान आइरहेको छ । यसलाई पूर्णसञ्चालन गर्न राजनीतिक समस्या समाधान आवश्यक छ । राजनीतिक समाधानसँगै सरकारले अहिलेसम्मको नोक्सानीको हकमा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । तीन महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र बचाउने हो भने अहिलेको नोक्सान सरकारले बेहोरिदिनुपर्छ ।उद्योग नचले पनि विद्युत प्राधिकरणले शुल्क लिइरहेको छ । बिजुली उपभोग नगरेको बेलाको शुल्क लिनु हुँदैन । कतिपय उद्योग औपचारिक रुपमा बन्द गरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बिजुली महसुल र कर्मचारीको तलब के गर्ने ? ठूलो समस्या छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।सुक्खा बन्दरगाहको ४० दिनको शुल्क सरकारले मिनाहा गरिदियो । अब कन्टेनरको समस्या छ । यो नेपाल र भारत दुवैतिरका सरकारसँग सम्वन्धित छैन । सिपिङ कम्पनीसँग सम्वन्धित छ । यस्ता धेरै समस्या छन् ।तराईमा आन्दोलन सुरु भएको ९६ दिन भइसक्यो । यो संविधानमा आफ्ना कुरा राख्न गरिएको आन्दोलन हो । आन्दोलनमा धेरै पक्ष जोडिएर समस्या गहिरिएको हो । आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्छौं भन्ने कुरा पनि आएको थियो तर संविधान घोषणापछि झन् गहिरियो । साढे तीन महिनासम्म बन्द हुनु उद्योग, व्यापारको लागि चानचुन कुरा होइन । साधारण अवस्थामा बन्द हुँदा प्रत्येक दिन २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।अहिले त कृषिदेखि सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ । दैनिक न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको आँकलन छ । नेपालभित्रको ड्राइपोर्टका सामान पनि निकालेर लैजान सकिएन । १ खर्ब रुपैयाँको सामान पारि अड्किएको छ । भर्खरै आएको जानकारीअनुसार सिपिङ कम्पनीले नेपालको कुनै पनि कन्टेनर नलिने भन्न थालिसकेका छन् । ५ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल कोलकातामा अड्किएको छ । एक दिनको एक ट्यांकरको डेमोरेज शुल्क २५ लाखसम्म व्यापारीले तिरेका छन् ।सामान ल्याउने अवस्था छैन । कसैले एलसी खोलेको छैन । आजै सबै खुला भए पनि सामान्य आपूर्ति हुन ६ महिना लाग्छ । कतिपय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकको के हालत होला ?खानी उद्योग सुक्खा सिजनमा चलाउनुपर्छ । अहिलेसम्म चलाउने सकिने अवस्था छैन । बर्खा लागेपछि चलाउनै सकिँदैन । यसले कति असर गर्ला ? हाइड्रोपावर निर्माण पूरै प्रभावित छ । यसले २–३ वर्ष निर्माण कार्य पर धकेल्छ ।दसैं, तिहार परेको यो तीन महिना सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने बेला हो । यो बेला दोब्बर असर पर्छ । यो बेलाको तीन महिना बन्द अरु बेलाको ६ महिनासरह हो । यो अवस्था अझै २०–२५ दिन कायम रह्यो भने भयावह स्थिति आउँछ ।राजनीतिक प्रकृतिको समस्याशंकर शर्मापूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगयो राजनीतिक समस्या नै हो । जुन दिन संविधान बन्यो, त्यही दिनदेखि समस्या सुरु भएको हो । संविधान आएपछि यसका जोखिम सरकारले पहिचान गर्न सकेन । भारतलगायत तेस्रो मुलुक र निकायले संविधान निर्माणमा सुझाव दिएका थिए । यो कुरा बाहिर ल्याउनुपथ्र्यो, भएन । सरकारको कमजोरी रह्यो । भारतको गलत विदेश नीति अहिलेको समस्याको कारण हो । भारतले २०/३० वर्षअघिको नीतिले नेपाललाई हेरिरहेको छ भन्दै भारतमै विरोध भइरहेको छ ।तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । तराईका झन्डै २२ सय उद्योग बन्द भएका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको पूर्वाधार विकासको क्षेत्र हो । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठप्प छ । पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पुँजीगत बजेट लक्ष्यको जम्मा ३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पर्यटन क्षेत्र त्यत्तिकै अस्तव्यस्त छ । यो क्षेत्रमा ८० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । होटलमा २० प्रतिशतमात्र बुकिङ छ भने नेपाल बसाइको अवधि १२÷१३ दिनबाट ६ दिनमा छोटिइरहेको छ ।तेल आपूर्ति कम भएकाले यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा नकारात्मक असर परेको छ । आजै नाकाबन्दी खुले पनि अवस्था सहज हुन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । यसैले सिंगो अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जाने सम्भावना छ । भूकम्पका कारण करिब ७ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका थिए । यो बन्द र नाकाबन्दीले अर्को ७ लाखलाई गरिबीको रेखामुनि झारिसक्यो । यसैले भूकम्प र अहिलेको परिस्थितिका कारण झन्डै २५ लाख व्यक्ति गरिबीमा झर्ने सम्भावना छ ।आयात तथा निर्यातको क्षेत्रमा करिब ३ वर्षसम्म असर रहन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ, लगानीको लागि विश्वास आर्जन गर्नै समय लाग्छ । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका दृष्टिले हेर्दा मुलुक ३ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । मानवीय समस्या झन् ठूलो छ । औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका छन् । भूकम्पका बेला बाँड्ने भनिएको औषधि र खाद्यान्न इन्धन नभएर पु¥याउन सकिएको छैन ।स्वास्थ्य, खाद्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसपछि बढी प्रभावित हुनेमा निजी क्षेत्र आउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत छ । साना व्यवसायी र ठूला औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हल गर्न सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो क्षेत्रको नोक्सान र क्षतिको आँकलन गरी राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति राष्ट्र बैंकमार्फत पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । राहत दिन सरकार नै अघि सर्नुपर्छ ।मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न अभाव भएका क्षेत्रमा पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्यो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ आवश्यक खाद्यान्न र अन्य सामग्री पु¥याउँदा मूल्य चुलिन पाउँदैन । अझ सिमान्तकृत वर्गमा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक सामग्री पु¥याउन छुट्टै कार्ययोजना चाहिन्छ । अहिले तेलको खाँचो धनी मात्र होइन गरिबलाई पनि उत्तिकै भइसक्यो । काठमाडौंको खपत घटाएर बाहिर जिल्लामा आपूर्ति गर्नुपर्छ । उपत्यकामा बाँडिने तेलमा केही कडाइ गरेर प्रभावित क्षेत्रमा सामान पु¥याउने ढुवानी साधनलाई दिनुपर्छ । औषधि अभाव जहाजबाट ल्याएर पूरा गर्न सकिन्छ । भूकम्पका बेला करिब ९० टन सामान अमेरिकाले ल्याइदिएको थियो । त्यसरी परिचालन गर्न सकियो भने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।दीर्घकालीन रुपमा बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राकृतिक ग्यास प्रयोग तथा पेट्रोलको आयात र व्यवस्थापन जरुरी छ । सुरक्षित भविष्यको लागि बिजुलीको विकल्प छैन । बिजुली भान्छा, उद्योगदेखि यातायातका साधनसम्म प्रयोग हुन सक्छ । यसैले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । सामान्य गार्हस्थ उपभोगका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि आजको आवश्यकता सहज आयात हो ।६ महिनाका लागि खाद्यान्न र ३ महिनाका लागि पेट्रोलियम भण्डारण गर्नुपर्छ । तेल मात्र होइन व्यापारमा विविधीकरणका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्छ । भारतीय सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक र विज्ञमार्फत राजनीतिक दबाब दिनुपर्छ । यो नै अन्तिम विकल्प हो । हाम्रो र भारतको कूटनीतिक मिसनलाई कुरा बुझाएर समस्या समाधानमा अघि सार्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई यहाँको जानकारी पठाउन सक्छौं । नेपालले सार्क, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठनसमक्ष नेपाल–भारतबीच भएका सन्धिको जानकारी गराउनुपर्छ । भारतले नाकाबन्दी होइन भनेको छ । त्यसैले यहाँको दैनिक समस्या र वस्तुस्थिति प्रमाणसहित ती निकायमा पु¥याउनुपर्छ । यहाँको अभाव, बढ्दो गरिबी, नेपाली र भारतीय व्यापार व्यावसायमा परेको समस्या दिनदिनै देखाउन सक्नुपर्छ ।दीर्घकालसम्म असरपोषराज पाण्डेअर्थविद एवं पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगलामो बन्द, हडतालले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । भारतसँगको समस्याका कारण वा मधेसको समस्याले गर्दा के कारणले बन्द, हडताल भएको हो वास्तविकता पहिचान हुन नसकेकाले समस्या लम्बिएको हो । यसबाट समस्या थप जटिल बन्न पुगेको छ । समस्या समाधान गर्नुभन्दा पहिले के कारण समस्या आयो पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । तराईको समस्या हो भने सरकार आफैं समस्यातिर लाग्नुपर्छ । भारतसँगको समस्या हो भने कूटनीतिक नियोगमार्फत पहल गर्नुपर्छ ।लामो बन्द, हडतालले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसकेको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत हुने अनुमान थियो, तर निकै कम हुने स्थिति आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले योगदान दिन्छ । मनसुन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कृषि उत्पादनमा कमी आउने निश्चित छ ।पर्यटन क्षेत्रले २० देखि ३० प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ । थोक र खुद्रा, औद्योगिक क्षेत्रले ६–७ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रले एक तिहाई योगदान दिने गरेको छ । बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक अवस्था सकारात्मक हुने देखिँदैन ।अर्थतन्त्र निराशाजनक स्थितितर्फ गइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन र अल्पकालीन असर पु¥याउने छ । अल्पकालीन असरमा कर असुली कम हुनेछ । हालसम्म कर असुली ज्यादै कम छ । कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ । कामको खोजीमा विदेसिएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यत्ति असर नदेखिएको मात्र हो ।नाकाबन्दीले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नेछ । नेपालमा लगानीको वातावरण नदेखेपछि लगानीकर्ता अन्य देशमा जानेछन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन पुनः ४–५ वर्ष लाग्नेछ । व्यापार–व्यावसाय विश्वासको आधारमा चल्ने गर्छ । आयात–निर्यातमा यसले असर पार्नेछ । छोटो समयका लागि जिडिपीमा असर परे पनि दीर्घकालमा विकास निर्माणमै असर पर्नेछ । यसले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा मात्रै होइन भविष्यको समृद्धि र विकासमा असर पार्नेछ ।अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले यसको जड के हो त्यसबारे थाहा पाउनु जरुरी छ । मधेसी दलसँगको मात्र समस्या हो भने वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरुसँगको समस्या होइन र भारतसँगको हो भने कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।भारतसँगको समस्या हो भने सबैभन्दा पहिले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ । भारतविरोधी मुभमेन्टलाई मेटाउनतिर लाग्नुपर्छ । तराईका दलहरुले सिर्जना गरको समस्या हो भने उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ । मधेसमा बस्ने पनि नेपाली हुन् भन्ने भावना जाग्नु पर्छ । अहिले मधेसमा बस्ने नेपालीलाई भारतीय हुन भन्ने लान्छना लगाइन्छ । त्यस्तो भावनाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए समस्याको नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ । उनीहरुको समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।भारतमाथिको निर्भरता शून्यमा झार्न सकिँदैन । ६६ प्रतिशत व्यापार भारतसँग छ । यसलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । शून्यमा झार्न सकिँदैन ।बन्द, हडतालका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामानको अभाव छ । पाइए पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । मालपोत लगायत सरकारी कार्यालयका जनशक्ति कामविहीन छन् । यो जनशक्तिलाई वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने काममा लगाउनुपर्छ । यसबाट मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।अहिले सबै वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्छु र आत्मनिर्भर हुन्छु भन्नु मुर्खता हो । वार्षिक १ खर्ब १० अर्र्बको आयातलाई कम गर्न सकिन्छ । पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गरे उद्योगले गर्ने वार्षिक २० अर्बको डिजेल खपत शून्यमा झार्न सकिन्छ । २५ अर्बको ग्यास आयात रोक्न सकिन्छ । यी दुवैबाट ४५ अर्ब आयात कम गर्न सकिन्छ । यसले परनिर्भरता कम गर्छ । इनर्जी सेक्युरिटी र फुड सेक्युरिटी गर्न सक्नुपर्छ । २४ घन्टा बिजुली आए डिजेल प्रयोग घट्छ । Tweet नागरिकLatest from